दु:शङ्काको घेराभित्र | मझेरी डट कम
ramhari — Fri, 08/31/2012 - 01:00
जमदार बाजे बज्यैका आखाँहरू रसाए छोरी सफलाको बिदायी पछि । बातावरणको अहो ! कस्तो नीरव शून्यता । छोरी अन्माउदाको दुखद क्षण।
‘’बाजेका सबै छोरी भाग्यमानी नै हुन्। जेठी साधना र माइली सजलाको पनि त कम्ति राम्रो छ । बूढाले नाजिकहुँदै च्याट्ट मिलाएर कुरा पट्टाई हाले छन् बिहेको सजिलै ।‘’ छिमेकीहरूका खासखुस चलि नै रहे हप्तौं सम्म ।
आफन्तहरूको फर्किने क्रम सुरु भयो बिहेवारी उम्काएर । सबैलाई कृतज्ञताको अभिवादन र यथोचित दान दक्षिणा सबै सम्पन्न गरे जम्दार दम्पतीले ।
‘’कम्ती त हेरिएन तर नजिकै लेख्या रैछ । भाग्यमानी छे सफला सबैभन्दा । अहो ! यो छोरीको जात सारै गार्हो । अर्काको नासो जिम्बा नलगाईन्जेल मनै पोल्ने । जवान छोरीको बाउ बन्न पनि ठूलै हिम्मत गर्नु पर्ने । यसो तल माथि परे औला ठड्याउने कुरौटे समाज ।‘’ बूढा बुढीको खासखुस चलिरह्यो अवेर सम्म ।
‘’अव छोराको पीर छैन पण्डित बाजे मनोजले आफैँ ल्याए पनि के गर्ने त ? पानी चल्ने जातसम्म ल्याई दिए भयो । हामी दुई बूढा बूढी मात्र त हौँ कति नै बाचौला र ? त्यसपछिको समाज रीतिथिति तिनीहरूकै हो । जे सुकै गरुन स्वतन्त्र छोड्या छु मैले त ।‘’ बूढा हासेँ जोडले ।
उता केटाको घरमा धुमधामसँग सफलालाई भित्र्याइयो । सबै जना दङ्ग । दाइजोको अपार राशी । जेठानीहरू तर्सिए, गाउलेहरूले जिब्रो टोके ।
ओहो ! कति लक्षिनकी बुहारी ..... गुणगानमा फूलबट्टा भरिए । सासू ससुरा, नन्द आमाजु सबैकी परमप्रिय भइन छिटै नै सफला । कुलीन भनेको कुलीन नै हो । बुढीको धाक धक्कु ।
मधुयामिनिका माधुर्यमा चुर्लुम्ब डुब्छन् ती दुई अनुपम जोडीहरू । आफ्नो प्रोजेक्टको काम सकिने बित्तिकै सुदीप सिधै घर आइपुग्छ, सफलाको प्रतिक्षालाई स्वीकार गर्दै ।उनकै आग्रहलाई बुझेर ती दुई युगल जोडी हनिमुनमा निस्किन्छन् दार्जलिंग, सिलगुडी हुदै आगरासम्म पुग्छन् । ताजमहल हेर्छन् । आफ्नो प्रेमको दाम्पत्यको दीर्घजीवनको कसम खान्छन । जीवनभर एक अर्कासँग कहिल्यै नछुटने , कहिल्यै नफुटने कसम शहाजहाँ र मुमताजको गाउमा प्रेमको नमूना ठाउमा ती दुइले गर्दछन् । समय चिप्लिरह्यो सलल खोलाझैं । तिनीहरूको माया प्रीतिको छाँगो छङ्ग छङ्गयाए झैं ।
तिनीहरूको लोभलाग्दो दाम्पत्य संसारले कति छिमेकका तन्नेरीहरूको गर्मी बढायो । अन्जानमै । सुदीप दङ्ग थियो एकातिर अर्कातिर सफला आफूलाई सफल भएको ठान्थिन दाम्पत्य सुखमा । जमदार बाजेकी कान्छी सुपुत्री उनलाई अभाव के हो कहिल्यै थाहा भएन । उनको बाल्यकाल लाडप्यारमै पुल्पुलिएर बित्यो । बाबुआमाको अनन्त मायाले सिन्चेर फुल्यो ।स्वभावैले चुलबुले चन्चले सफला पढ्नमा भन्दा खेल्नमा मन गर्थिन । कान्छी छोरी भएकीले पनि बुढाबुढीले त्यति हप्कीदप्की गरेनन । प्रवेसिका उत्तीर्ण गराउन कम्ति हम्मे त परेन उनलाई । तैपनि चौथो पटक सफलता पाएकी उनले ठाँटसँग क्याम्पस पढिन ।
बुढाबुढी खुसी थिए, छोरी कलेज गएकिमा । तर उनको मन पाठ्यपुस्तकमा नभएर मायाप्रीतिका सस्ता युधिर थापाका उपन्यासहरूमा र हिन्दी चलचित्रमा उन्मुख भइसकेको थियो ।कितावको बीचमा सानो उपन्यास राखेर उनि रातभर पढ्थिन । बाबुआमा छोरीले कस्तो मन लगाएर पढेकी भनेर खुसी हुन्थे । तर उनि .......... यौवनवयमा चलचित्र र उपन्यासले पार्ने तीब्र प्रवाभको शिकार भैसकेकी थियिन । पारिवारिक सम्पन्नताले त्यसमा मलजल थपी रह्यो । सोझा बुढा बुढीलाई ती सबै कुराको के नै पत्तो हुन्थ्यओ र ? छोरीको अलि स्वतन्त्र स्वभावको सानो सुइँको मात्र पनि तिनीहरूलाई थिएन । पूराना शैलीका जमदार दम्पतीहरूले त्यस्तो कुनै सम्भाब्य खतराको घन्टी नबज्दै उनलाई कन्यादान गरेर पठाएकोमा ठूलो राहत अनुभव गरिरहे ।
उपर्युक्त वातावरणको परागशेचनपछि बागबगैचामा सुन्दर फूलहरू फुल्न र फल्न थाले । प्राकृतिक बसन्त मुस्कुरायो । बोट बिरुवाहरू नयाँ मुना र हरीत सौन्दर्यले नाच्न थाले । चराचुरुंगीहरूले मांगालिक धुन बजाए प्रेमको मधुवनमा ।
ती दुई जोडीहरू बोलि रहे रात भरि ........
सफला सबैकी प्रेम र सदभावकी पात्र भइ रहिन दिनानुदिन । उनको यत्रो सम्मान र भाउ देखेर जेठानीहरू भित्र भित्रै कुडीन्थे तर कसको के लाग्दो रैछ र लेखेर ल्याको कुरा । उनीहरूले थुक निल्थे इर्श्याले घुटुक्क ।
प्रेमको बिजांकुरण बढदै गयो तिनीहरूको ।एउटा नयाँ लहर, नयाँ ज्योतिको प्रतिक्षा सबैले गरि रहे समय सापेक्ष ।श्रीस्टी चक्रको एउटा कडी । बंश परम्पराको पुर्खेउली बिराशत बिसाउने एउटा चौतारी । धर्म भीरु हिन्दु समाजका अझ ब्राह्मणहरूको त के कुरा ? छोरै चाहिने पिण्डपानी गर्ने । मर्दा दाग बत्ति दिने । काजक्रिया सम्पन्न गर्ने ... ।
लौ बधाई छ सुदीप भाइ भोज खुवाउनु पर्छ । प्रसुती वार्डमा काम गर्ने सिस्टरहरू उषा र कल्पनाको आग्रह ।
प्रसुती गृहको बेडबाट यी सबै दृस्यहरूलाई देखिरहेकी सफलालाई कता कता चीसो पस्यो सासुको अनपेक्षित व्यवहारले । तथापि नवजात शिशुका सबै प्रारम्भिक कर्म कार्यहरू सम्पन्न भए र नामाकरण भयो ‘’सुसन’’ ।
कतै बिवाह पूर्वनै कसैको ..........? त होइन । शंकाले तीब्र रुप लियो । एक कान दुई कान मैदान । भ्रमले सबैलाई दिग्भ्रमित बनायो । कसैले त्यसको बस्तुस्थिति जाच्न, बुज्न चाहेन । केवल गाउले हल्लाको खेति पछि तिनीहरू सबै कुदी रहे । सबैभन्दा सासु बुढी अग्र स्थानमा देखापरिन पारिवारिक संग्रामको महारथी बनेर । आफ्नै बुहारीका बिरुद्ध । नवजात सन्ततिका बिरुद्ध ।
पारिवारिक यातनाका यस्ता हजारौं क्ष्यप्यास्त्रहरू ऊ माथि दिनहुँ निर्घात बर्सि रहे । बिचरी सफला किम्कर्तब्यबिमुड बनिन् त्यसै त्यसै । हिजो सम्म रानी मानेर चाट्ने उनको आफ्नो लोग्ने आमा पट्टि लाग्यो क्रमशः ।
जेठानिहरूलाई चाहिएकै तेइ थियो ... उनीहरूले घ्यू थपे प्रज्वलित पारिवारिक अग्निमा । छिमेकीहरू अनेकौं अड्कलबाजिका नयाँ नयाँ किस्साहरू थपे । हिजो सम्मको स्वर्गजस्तो घर आज हेर्दा हेर्दै नारकीय कुण्डमा बदलिदै गयो ।तथापि कतिले सम्झाए – ‘’ त्यस्तो भन्नु हुदैन बाजा बजाएर दुनियाँकासामू अग्निलाई साक्षी राखी जीवनभर साथ दिने कसम खाएर ल्याएकी आफ्नी श्रीमती/ बुहारीलाई । ‘’ त्यस्ता अपवादहरू धेरै छन् हाम्रो समाजमा सात/ आठ मैनामा जन्मिएकाहरू प्रीथिभीनारायण शाह ....पनि त्यसरी नै जन्मेका थिए । डाक्टरलाई राम्रो सँग सोध्न सकिन्छ, जाच्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ ।
नुनिला आँसुहरू पिएर अपमानित हुँदै माइतिको कौसीमा उनका यौवनका उत्ताल तरंगहरू बितिरहेछन । तर दुनियाँ कसैले पनि उनको पक्षमा यथार्थ्तासंग साक्षात्कार हुने हिम्मत गरेन । त्यस प्रकारको बच्चा पैदा हुने सम्भाव्यता र त्यसमा गर्न सकिने साँचो परीक्षणमा मेडिकल साइन्स के भन्छ ? प्रसुती रोग बिशेषज्ञहरू के भन्छन ? यी सारा अनुत्तरित प्रस्नहरू उनको मनभरी घुमी रहेछन् एउटा जीवनभरकै ठूलो ब्यथा बनेर । उनि अध्यारो कालो महारातमा माइतिको कौसीमा टोलाइरहेकी छन् । आफूमाथिको अन्यायको कालो टीका पुछिने सम्भावना खोज्दै, छोराको सुदुर भबिष्य सम्झदै टाsssडाको मधुरो तारा नियालिरहिछन ।
"भन तिमी को हौ?"
म​लाई हिरो ब​नाउने नि उनी हुन !
बहु-उपप्रधानमन्त्री र माइक